ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအဆင့်ဆင့် – BurmeseHearts
သန္ဓေသားရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘာကြောင့် ရက်သတ္တပတ်နဲ့ ဖော်ပြသလဲ? “0 week” မှာ ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? သန္ဓေသားရယ်လို့ စတင်ဖြစ်တည်ချိန်ဟာ ဘယ်ရက်သတ္တပတ်ထဲမှာလဲ? ရာသီသွေးမပေါ်တော့တဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ ဖြစ်တတ်သလဲ? ဘယ်အချိန်မှာမှ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာကို သတိထားမိလေ့ရှိသလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင် အော့အန်ခြင်းတွေကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး ခံစားရသလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းမှာ ဆီးခဏ ခဏသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင် အော့အန်ခြင်းတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ပျောက်သွားလေ့ရှိတတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်စမှာ ဘာကြောင့် ပျို့အန်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲ? Morning Sick ခံစားနေရတဲ့အချိန် ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဗိုက်ကြီးတောင့်နေတတ်သလား? ကိုယ်ဝန်လျောပျက်လေ့ရှိတဲ့ကာလဟာ ဘယ်အချိန်တွေလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? Down syndrome ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ? Down syndrome မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရသလား? Down syndrome ကို ဘယ်အချိန်က စတင်ပြီး စမ်းသပ်သိရှိနိုင်မလဲ? Down syndrome ရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လိုစမ်းသပ် သိရှိနိုင်မလဲ? Down Syndrome ရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို သိရက်နဲ့ လွယ်မွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ? Down Syndrome ရောဂါ ပါလာတဲ့ကလေးတွေဟာ သာမာန်ကလေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွဲပြားမှုရှိသလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်မှ (၁၅)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်မှ (၁၅)ပတ်အတွင်း ဘာဝေဒနာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ? အချင်းဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်မှ (၁၅)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်မှ (၁၅)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? မိခင်လောင်းရဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ဗိုက်ထဲက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို သက်ရောက်စေသလား? ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့ဇနီးကို ဖခင်လောင်းတွေက ဘယ်လို နားလည်ပြုစုမှုမျိုး ပေးသင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ မိခင်လောင်းရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သက်သာဖို့ ဖခင်လောင်းက ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဆံပင်ကျွတ်သက်သာအောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ ဇနီးကို ဖခင်လောင်းတွေက ဘယ်လို နားလည်ပြုစုမှုမျိုး ပေးသင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်းရောက်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်သင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၄)ပတ်မှ (၂၇)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ? ကလေးမလှုပ်တာလား ၊ ကလေးလှုပ်တာကို သတိမထားမိတာလား? ကလေးမလှုပ်ဘူးလို့ သံသယရှိရင် ကလေးလှုပ်ရှားမှုရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လို စမ်းသပ်သင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ခြေ ၊ လက်တွေ ယောင်လာတတ်သလား? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေခံစားရတတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ ဆီးအိတ်ရောင်အန္တရာယ် ဘာကြောင့် ကြုံတွေ့နိုင်သ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘာကြောင့်ဝမ်းချုပ်သလဲ? ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ ဝမ်းမချုပ်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? မွေးဖို့နီးလာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအဆင့်ဆင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင့်(၁)နဲ့အဆင့်(၂)ကို လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကနေ BurmeseApp ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရင်လုပ် ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရပါမယ်။
ပြီးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအဆင့်ဆင့် နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။